UKaizer Motaung Junior
UKaizer Motaung Junior, osanda kuqokwa njengeSporting Director kwiKaizer Chiefs, uthi uzizwa ehloniphekile kakhulu ngokunikwa lesi sikhundla eqenjini laseNaturena.
UJunior, oyindodana kaKaizer Motaung, umenyezelwe njengeSporting Director ngoLwesine emini. Kuthiwa uzothatha lesi sikhundla kusukela ngoJulayi 1 kanti uzosebenzisana noMolefi Ntseki, oyinhloko yabaqondisi kwiChiefs, nemenenja yeqembu uBobby Motaung. Phakathi kwezinto azobhekana nazo ngqo ukuthi iqembu lishaya into ecokeme enkundleni nokuthi abadlali bayimiqemane ngokufanele.
“Okokuqala nje ngithanda ukubonga kuMdali ngokwenza lokhu kwenzeke kimina. Yebo izindaba ezinkulu noshintsho olukhulu kimina lolu. Ngizizwa ngihloniphekile futhi sekunesikhathi ngixoxa nosihlalo weqembu ngezinto eziningi, nabanye abantu axhumene neqembu.
“Kuyinto enkulu kakhulu ukuthi ngiphakamise isandla ngibe nengikwenzayo kulesi sikhungo esikhulu kangaka, neqembu lebhola elihlonishwayo. Ngikubheke ngabomvu ukuthi ngibe yingxenye yempumelelo nekusasa leChiefs,” kubeka uJunior.
UMotaung omncane uke wadlalela iBidvest Wits emazingeni aphansi, wabuya weza kwiChiefs wadlala enkulisa yayo. Ngemuva kwalokho ube eselibangisa phesheya lapho edlalele khona iChelsea neTSV Munich 1860 (ezinkulisa zakhona) e-England naseGermany ngasekupheleni kwabo-1990 nasekuqaleni kwabo-2000.
Ngemuva kwalokho ubuyele kwiChiefs ngo-2003 lapho edlalele khona iqembu lakubo iminyaka eyishumi. Uwagaxe emgibeni amakhokho akhe ngo-2014 eneminyaka engu-32.
“Ukuqokelwa lesi sikhundla kwami okulandelwa ukuqokwa kukaMolefi Ntseki njengeTechnical Director, kukhombisa ushintsho nokuthi sibheke kuphi njengeqembu. Kuzoba yinto emnandi ukusebenza ngemuva kwabantu abalazi kahle ibhola.
FUNDA NALA: Kusolwa uphuzo kowayefunwa yiChiefs osephuphile
“Lapha ngikhuluma ngoNtseki, Stuart Baxter, Arthur Zwane nemenenja yethu yebhola (uBobby Motaung). Ngicabanga ukuthi lena yinto entsha enkampanini yethu. Kuyadingeka ukuthi sishintshe amagiya ukuze kuqhamuke impumelelo. Kuhlale kufika isikhathi lapho kumele kube khona imibono emisha, nendlela ehlukile yezisombululo,” kusho uJunior.
UMotaung Senior ubongele indodana yakhe wabuye wayemukela kulesi sikhundla sayo esisha.
“Siyaziqhenya ngokubona uKaizer Junior ethatha lesi sikhundla esisha. Lesi sikhundla besingeke sithathwe omunye umuntu uma ubheka indlela abeziqeqesha ngayo kusukela esemncane, nokuthi uthole iB.Comm Degree okuyinto engavamisile kubadlali bebhola abangaphansi kweminyaka engu-40.
“Bekubalulekile futhi kithina ukuthi singamjahi ngemuva kokuyeka kwakhe ukudlala ibhola ngoba ubedinga isikhathi sokuqonda kahle ukuthi kwenziwani ehhovisi, aphinde ahlome ngemfundo efanele,” kusho uMotaung omdala.
Previous Previous post: AmaProteas ethubeni lokuqeda nya ngeWindies
Next Next post: Kusolwa ukuziphatha ngokunyamalala kowayefunwa yiChiefs